Uthembisa ubumnandi kuChannel O | IOL Isolezwe
Uthembisa ubumnandi kuChannel O
Isolezwe / 7 June 2012, 11:37am /
UDJ Ms Cosmo uthi ufuna ukunikeza abantu umuzwa wasekilabhini behleli ezindlini zabo uma esekwebha amapuleti bukhoma ohlelweni iBass-ment Mix kuChannel O kulandela ukuqashwa njengoDJ wokuqala wesifazane kulolu hlelo
KUQOPHEKE umlando esiteshini somculo sethelevishini iChannel O ngemuva kokuqashwa kukaDJ wokuqala ngqa wesifazane ukuba adlale ohlelweni okudlala kulo bukhoma oDJ, iBass-ment Mix.
Lesi siteshi esitholakala ku-channel 320 kuDStv silande uNoni “DJ Ms Cosmo” Rwaxa ukuba azojoyina uDJ Andy X noDJ Pierre Pressure ekukwebheni amapuleti kwiBass-ment Mix edlala ngoMsombuluko kuya ngoMgqibelo ngo-4 ntambama nango-11 ebusuku.
Kulolu hlelo uDJ udlala ihora lonke ehlanganisa bukhoma ama-video ezingoma.
UDJ Ms Cosmo, odlala i-hip hop, uthe uyajabula ngokujoyina umndeni wakwaChannel O.
“Ngizolethela abantu umuzwa wasekilabhini behleli emakhaya abo antofontofo,” kusho uDJ Ms Cosmo odabuka eDiepkloof, eGoli.
Lo DJ uthe selokhu aqala ukudlala ngo-2010 ngemuva kokubona ukuthi uthenga iCD ugcine uthanda kuyo izingoma ezimbili ezinye ungazithandi.
“Mina ngangijwayele ukuthi ngizihlanganise zonke izingoma engizithandayo bese ngizidlalela zona emotweni yami. Uma sihlangene nabangani babengicela ukuthi ngize nazo base bethi ngoba nginodlebe lomculo mhlawumbe kumele ngibe nguDJ,” kusho uMs Cosmo owafundela ukuba nguDJ esikoleni sikaDJ Zinhle, iFuse Academy.
Lo DJ oseke washiyelana inkundla noDJ abahlonishwayo okubalwa kubo uDJ Fresh, Black Coffee nabanye, uthe isikole sibaluleke okudlula yonke into.
“Kumanje ngenza iHonours Degree ezifundweni zeFinancial Management eCharted Institute of Management Accauntants (CIMA),” kusho yena.
Uzakwabo omusha kaMs Cosmo, uDJ Andy X, uthe ukujoyinwa nguMs Cosmo kuzovulela amathuba oDJ besifazane base-Afrika yonke njengoba iChannel O isakaza nangaphandle kwakuleli.
“Sebebaningi oDJ besifazane abakhona kodwa bayingcosana abakwazi ukudlala kahle. Ukubona kwabo uMS Cosmo kuzobagqugquzela ukuthi basebenze kanzima ukuze bafane naye,” kusho u-Andy X.